Betsaka ny olona lasa mpikambana ao amin'ny The Word Foundation noho ny fitiavany ireo boky Percival, ny fitaomana lalina nananan'ny asan'i Percival teo amin'ny fiainany sy ny faniriany hanohana anay amin'ny fanatontosana mpamaky bebe kokoa. Tsy toy ny fikambanana hafa, tsy manana guru, mpampianatra na fahefana mitarika isika. Ny tanjontsika sy ny fanoloran-tenantsika dia ny hampahafantatra amin'ny olona manerantany sangan'asa lehibe Percival, Fisainana sy faniriana, ary koa ireo bokiny hafa. Afaka manolotra torolàlana vitsivitsy isika, raha angatahina, fa mpanohana ny fahendrena amin'ny fitantanan-tena ihany koa isika - mianatra matoky ary mampiditra fahefana ao anatiny. Ireo boky Percival dia mety ho mpitari-dalana hanampy amin'ity dingana ity.
Ny mpikambana rehetra ao amin'ny The Word Foundation, na inona na inona ny fanohanana azonao fidiranao, dia hahazo ny gazetinay isam-bolana, The Teny (Sample Magazine). Ny mpikambana koa dia mahazo fihenam-bidy 40% amin'ny boky Percival.
Ny Word Foundation dia manohana ny fandalinana ny bokin'i Percival. Tamin'ny alàlan'ny gazetinay isaky ny telovolana, The Word, dia nanangana toerana iray hampahafantarana ireo mpamaky anay ny lalam-pianarana samihafa. Rehefa lasa mpikambana ao amin'ny The Word Foundation dia misy amin'ny alàlan'ny gazetinay ity fampahalalana ity: